Tsanganana - SmartMe
Dom » andry
Tsindrio ny arabe, fiara (autonomus). Rahoviana no hitondra fiara ny fiara?
tanàna, Automotive, samochody, teknolojia
Amin'ny ankapobeny, iray volana isam-bolana eo ambanin'ny varavarankeliko, izay misy lalana somary be olona, ​​dia misy ny fianjerana mafy na lozam-pifamoivoizana toa mampidi-doza. Hatramin'ny fialantsasatra dia mpamily roa no mifanatrika. Ahoana raha ...
Ny Smart Home aorian'ny herintaona mahery - ahoana no fomba hamoronana trano marani-tsaina?
Automations, trano hendry, manan-tsaina, trano hendry
Tsotra ny hevitra momba ny Smart Home - "tsy maintsy tonga ho azy ny zava-drehetra". Izaho manokana dia nanampy an'ity fitsipika ity - "miaraka amin'ny fahafahan'ny fanaraha-maso ataon'ny any ivelany". Fa maninona Raha ny mahazatra ahy na ny namako dia ...
Ho lasa tsy fahita firy isika rehetra rehefa tonga ho antsika ny masinina
algorithm, CD-Action, haino aman-jery, haino aman-jery vaovao, asa
Nandritra ny dimy taona dia niofana ho mpanao gazety aho ary toy ny ra ao anaty fasika izany rehetra izany - satria toa misy solosaina mampidi-doza toy ny teo amin'ny toerako. Satria ny algorithm dia efa afaka manomana lahatsoratra tsotra ...
Mifanalavitra. Ahoana no hanovan'ny valanaretina ny asantsika sy ny fianarantsika?
Covid, aterineto, fianarana lavitra, areti-mifindra, asa lavitra
Foana ny efitrano fandraisam-bahiny, navoaka ny hidiny - ary, fanovana, fanovana covid vaovao no mitranga. Ny toe-javatra amin'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra dia miova amin'ny herinandro ka hatramin'ny herinandro ary tsy afaka ny ...
Kaonty maty toa antsika. Inona no sisa tavela amin'ny solosainantsika rehefa tsy eo intsony isika?
Amin'ny sarimihetsika manaitra amerikana, indraindray isika dia mahita tovolahy kanto eo amin'ny 50 taona misy volo fotsy ary misy famantaranandro volamena eny an-tànany, izay mandeha amina dokam-barotra mankasitraka ny sitrapony, ary avy eo dia maty amin'ny fomba miavaka ho an'ny fampandrosoana ...
Tompokovavy malala mahay indrindra!
Androany 8 martsa! Andron'ny vehivavy androany. Avy amin'ity toerana ity dia tianay ny milaza ny firariana tsara indrindra ho an'ireo vehivavinay! Hanao ahoana izao tontolo izao raha tsy eo ianao ... Tsy fantatray ary tsy tianay ny hahafantatra. Na izany aza, maneho ny fanirianay izahay tsy ...
Fa tsy ianao no miantso! Miditra amin'ny vanim-potoanan'ny lalina lalindalina isika
7 Martsa 2021
ai, deepfake, deeplearning, Society, teknolojia, tiktok
Alao an-tsaina hoe indray andro ianao mandrehitra ny solosainanao ary tampoka dia tototry ny namanao rehetra ny fampahalalana fa nanao zavatra hafahafa ianao. Hitan'izy ireo ilay horonantsary, fotoana vitsy lasa izay izay nandrahona ny hikapoka ny filoham-pirenena ianao. Na ny toerana nanendrikendrehanao ny Papa ...
Milalao poker amiko ny Internet - omen'ny printsy aho ary alain'ny polisy
1 Martsa 2021
fiarovana, fiarovana amin'ny Internet, fiarovana cyber, aterineto
Ny mpampiasa internet antonony dia afaka mandalo be amin'ny fiainany. Fifandraisana amin'i Will Smith, mandova harena avy amin'ny andriana Nizeriana na - farafahakeliny indray mandeha isam-bolana - fandresena lehibe amin'ny iPhone vaovao na $ 30. zlotys ....
Ho an'i Gomez, ho an'i Erathia! Fa maninona isika no afaka milalao Gothic sy Heroes III mandritra ny 20 taona?
Gothic, Gry, mahery foIII, Minecraft, wolfenstein: filalaovana etm
Indraindray mandondona ny handrina isika, mahita ny fomba ahafahan'ny taranaky ny ray aman-drenintsika na ny raibe aman-drenibenay, isan-taona, 40 taona misesy, mijery an'i "Teddy" na "Izy" ary mihomehy hatrany ireo vazivazy ireo ihany ...
Ohatrinona no ilainao manome lanja ... Ahoana raha nanjavona fotsiny ny Internet?
loza, aterineto, teknolojia
Fotoana vitsy lasa izay, niely eran'izao tontolo izao ny fampahalalana - nisaraka i Russia, nisaraka tamin'ny Internet eran-tany i Russia! Ary na dia nambara fa nanitatra aza izy io, dia namporisika ahy hisaintsaina - ary raha ny firenena rehetra ...
Miaraka amin'ny tarehin'i Marilyn Monroe ... Ao anaty hologramy! Ahoana no hamelomantsika ireo olo-manan-tantara?
7 Febroary 2021
fampianarana, hologram, fandokoana, tranombakoka, teknolojia
Nanokatra tranombakoka ry zareo! Farany - misy te hiteny, na farafaharatsiny tiako ho lazaina, satria tiako ity karazana fitoerana masina ity. Hatraiza ny halehiben'ny fifaliako raha niteraka ...